မီလန်နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
မီလန်မြို့ခံ နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားများ (၁)
18 Oct 2018 . 11:12 AM
အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ မီလန်မြို့ခံနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ အရှိန်အ၀ါက တဖြည်းဖြည်ကျဆင်းလာပေမယ့် တစ်ချိန်က သူတို့နှစ်သင်းဟာ အီတလီဘောလုံးလောကရဲ့ Giant တွေအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေ အသိပါပဲ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေဟာ အေစီမီလန်၊ အင်တာမီလန်အသင်းမှာ ကစားခဲ့ကြပြီး တချို့ဆိုရင် နှစ်သင်းစလုံးအတွက် ကစားခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီကစားသမားတွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ . . .
အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င် ဗီအဲရာဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းက အေစီမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်ကစားခွင့်မရခဲ့ဘဲ တစ်ရာသီသာကြာပြီး အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger က ဗီအဲရာကို ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ဗီအဲရာရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အာဆင်နယ်နဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ အင်တာမီလန်အသင်းတွေဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ စီးရီးအေ(၄)ကြိမ်ဆက် ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်။
အက်ဂါဒေးဗစ် Edgar Davids
ဘောလုံးသမားဘ၀မှာ “Pitbull”(ခွေးဘီလူး)ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ရခဲ့တဲ့ ဒတ်ခ်ျ နာမည်ကျော်ကစားသမားကြီး အက်ဂါဒေးဗစ်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ သူဟာ မီလန်မြို့ခံနှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးပေမယ့် သိပ်မကြာခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၆-၉၇ မှာ အေစီမီလန် ၊ ၂၀၀၄-၀၅မှာ အင်တာမီလန်အသင်းအတွက် ကစားခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှု မရခဲ့ဘဲ သူ့ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုအများဆုံးရခဲ့တာက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းက အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ဘရာဇီးလ်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ဘဲ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး အသင်းနဲ့ UEFA ဖလားတစ်လုံးသာရခဲ့တယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အေစီမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမယ့် ဒဏ်ရာပြဿနာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် များလာတာတွေကြောင့် ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ပီယာလို Andrea Pirlo
အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုကို ပြောပါဆိုရင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ပီယာလိုကို မြို့ခံပြိုင်ဘက် အေစီမီလန်အသင်းဆီ ရောင်းချခဲ့တာပါပဲ။ ပီယာလိုဟာ အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်(၂)ကြိမ်၊ စီးရီးအေ(၂)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ဗီယာရီ Christian Vieri
ရော်နယ်လ်ဒိုကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာလည်း ဗီယာရီကို ပေါင်(၃၂)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး စံချိန်ထပ်ချိုးခဲ့တယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းအတွက် ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ မှာတော့ အေစီမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပေမယ့် တစ်ရာသီသာ ကစားခဲ့တယ်။
မီလန်မြို့ခံနှစ်သင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေက အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီထဲက (၅)ဦးကို အပိုင်း(၁)အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို အပိုင်း(၂) ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် . .
မီလနျမွို့ခံ နှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမညျကြျော ကစားသမားမြား (၁)
အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော မီလနျမွို့ခံနှဈသငျးစလုံးရဲ့ အရှိနျအဝါက တဖွညျးဖွညျကဆြငျးလာပမေယျ့ တဈခြိနျက သူတို့နှဈသငျးဟာ အီတလီဘောလုံးလောကရဲ့ Giant တှအေဖွဈ ရပျတညျခဲ့တာ ပရိသတျတှေ အသိပါပဲ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ဘောလုံးသမားတှဟော အစေီမီလနျ၊ အငျတာမီလနျအသငျးမှာ ကစားခဲ့ကွပွီး တခြို့ဆိုရငျ နှဈသငျးစလုံးအတှကျ ကစားခဲ့ဖူးတယျ။ အဲဒီကစားသမားတှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတော့ . . .
အာဆငျနယျဂန်ထဝငျ ဗီအဲရာဟာ ၁၉၉၅ ခုနှဈတုနျးက အစေီမီလနျအသငျးကို ပွောငျးရှကေ့စားခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ပုံမှနျကစားခှငျ့မရခဲ့ဘဲ တဈရာသီသာကွာပွီး အာဆငျနယျအသငျးနညျးပွ အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger က ဗီအဲရာကို ချေါယူခဲ့တယျ။ အာဆငျနယျအသငျးမှာ ဗီအဲရာရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေိုတော့ ပရိသတျတှေ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အာဆငျနယျနဲ့ လမျးခှဲပွီးနောကျမှာ ဂြူဗငျတပျဈ၊ အငျတာမီလနျအသငျးတှဆေီ ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး အငျတာမီလနျအသငျးနဲ့ စီးရီးအေ(၄)ကွိမျဆကျ ဆှတျခူးခဲ့တယျ။
အကျဂါဒေးဗဈ Edgar Davids
ဘောလုံးသမားဘဝမှာ “Pitbull”(ခှေးဘီလူး)ဆိုတဲ့ နာမညျပွောငျရခဲ့တဲ့ ဒတျချြ နာမညျကြျောကစားသမားကွီး အကျဂါဒေးဗဈကို ပရိသတျတှေ မှတျမိကွဦးမှာပါ။ သူဟာ မီလနျမွို့ခံနှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးပမေယျ့ သိပျမကွာခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၆-၉၇ မှာ အစေီမီလနျ ၊ ၂၀၀၄-၀၅မှာ အငျတာမီလနျအသငျးအတှကျ ကစားခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှု မရခဲ့ဘဲ သူ့ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးရခဲ့တာက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။
၁၉၉၇ ခုနှဈတုနျးက အငျတာမီလနျအသငျးဟာ ဘရာဇီးလျကွယျပှငျ့ဖွဈလာတဲ့ ရျောနယျလျဒိုကို ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျမကိုကျခဲ့ဘဲ ရျောနယျလျဒိုဟာ ဒဏျရာပွဿနာတှနေဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး အသငျးနဲ့ UEFA ဖလားတဈလုံးသာရခဲ့တယျ။ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ အစေီမီလနျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ပမေယျ့ ဒဏျရာပွဿနာ၊ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ မြားလာတာတှကွေောငျ့ ခွစှေမျးမပွနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ပီယာလို Andrea Pirlo
အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ အကွီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုကို ပွောပါဆိုရငျ ၂၀၀၁ ခုနှဈမှာ ပီယာလိုကို မွို့ခံပွိုငျဘကျ အစေီမီလနျအသငျးဆီ ရောငျးခခြဲ့တာပါပဲ။ ပီယာလိုဟာ အစေီမီလနျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျခံရတဲ့အထိ အောငျမွငျခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျ(၂)ကွိမျ၊ စီးရီးအေ(၂)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ရျောနယျလျဒိုကို ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ချေါယူခဲ့တဲ့ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ ၁၉၉၉ ခုနှဈမှာလညျး ဗီယာရီကို ပေါငျ(၃၂)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့ပွီး စံခြိနျထပျခြိုးခဲ့တယျ။ အငျတာမီလနျအသငျးအတှကျ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၀၅ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့ပွီး ၂၀၀၅ မှာတော့ အစေီမီလနျအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့ပမေယျ့ တဈရာသီသာ ကစားခဲ့တယျ။
မီလနျမွို့ခံနှဈသငျးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှကေ အမြားကွီးပါပဲ။ အဲဒီထဲက (၅)ဦးကို အပိုငျး(၁)အဖွဈ ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့သူတှကေို အပိုငျး(၂) ဆကျလကျဖျောပွသှားမှာဖွဈပါတယျ . .